Xeebaha ugu wanaagsan ee ku yaal Chiclana: La Barrosa, Playa del Puerco iyo Sancti Petri | Wararka Safarka
Xeebaha ugu wanaagsan ee ku yaal Chiclana: La Barrosa, Playa del Puerco iyo Sancti Petri
Lola curiel | | Magaalooyinka Spain, Xeebaha
Waxaa aasaasay Foosiya qarnigii XNUMXaad ee dhalashadii BC ka hor koonfurta Cádiz, Chiclana ayaa loo tixgeliyaa mid ka mid ah magaalooyinka ugu da'da weyns ee gobolka. Sanadkii 1303, Fernando IV wuxuu siiyay dhulalka Chiclana guriga Medina Sidonia, gaar ahaan Alonso Pérez de Guzman, oo sidaas ayaa magaalada hadda loo aasaasay. Kala wareejintii goblayaasha iyo kobaca uu gumeysigii Mareykanka la yimid, wuxuu ku dhammaaday dib u soo nooleyntiisa wuxuuna horseeday soo bixitaankeedii taariikhiga ahaa.
Maanta, Chiclana wuxuu soo dhaweynayaa tiro badan oo dalxiisayaal ah, heer qaran iyo mid caalami ahba, oo soo jiidata cimilada iyo hantida dabiiciga ah ee deegaanka. Waana taas, tan 203 km ² ee ku jirta muddada degmada, ku dhowaad saddex meelood meel waxay ka mid tahay Beerta Qaranka ee Baay of Cádiz. Xeebaheeda, oo dhowr kiilomitir u jirta aagga magaalada, ayaa ka mid ah sheegashooyinka ugu waaweyn dalxiis magaalo xeebeed Si aadan u seegin fursad aad ugu raaxeysatid ciidahaaga ciidda Chiclana, Waxaan kuugu sheegi doonaa boostadan oo ah xeebaha ugu fiican.
1 Xeebta La Barrosa
2 Xeebta Puerco
3 Xeebta Sancti Petri
3.1 Qasriga Sancti Petri
Xeebta La Barrosa
In kasta oo ay ku yaalliin aag magaalo, tayada iyo ilaalinta xeebtaan waa mid gaar ah. Xaqiiqdii, waxay leedahay shahaado deegaan sida Calanka Buluugga ah, oo gaar u ah xeebaha iyo dekedaha, wuxuuna u hoggaansamayaa ISO 14001, oo ah heer caalami oo lagu maareynayo deegaanka.
Su marin fudud iyo ballaadhkeeda xeebteeda, oo dhererkeedu yahay 60 mitir, ayaa ka dhigaysa a ikhtiyaar ku habboon dalxiisayaasha raadinaya xeeb raaxo leh, kaas oo lagu gaari karo gaari iyo adeegyo kaladuwan oo kaladuwan, iyada oo aan laga waantoobin biyo nadiif ah iyo quruxda dabiiciga ah ee xeebta Cadiz.
In kasta oo loo jiifo in lagu nasto ciideeda wanaagsan ee dahabka ah mar horeba waa wax lagu farxo, sidoo kale La Barrosa waxay leedahay dalab xiiso leh oo loogu talagalay dalxiisayaasha ugu firfircoon. Waxaa jira iskuulo Surf iyo kitesurf oo bixiya koorsooyin waxayna leeyihiin adeeg kiro ah qalabka isboortiga. Hawlaha sidoo kale waa la abaabulayaa oo kuu oggolaan doona inaad ku raaxaysato muuqaalka adigoo ku raaxeysanaya waayo-aragnimo wacan oo xiiso leh, waxaa jira xarumaha fardaha oo bixiya fuulitaanka fardaha xeebta.
Haddii aad ka badan tahay qolka nasashada iyo baarka xeebta, waxaad ku yeelan kartaa waxoogaa cabitaanno qabow ah ama biir ah Mojama Beach ama Albarrosa, labada gooboodba ficil ahaan waxay ku yaallaan ciidda, marka lagu daro jawiga aadka u wanaagsan, waxay bixiyaan cunto qurux badan. Daaran socodka guud waxaad ka heli doontaa xulashooyin kale oo caloosha ku habboon, makhaayado leh dabaqyo waaweyn oo ku habboon daawashada qorrax dhaca. Ha ka tegin adigoon isku deyin kalluun shiilan, saxanka caadiga ah ee aagagga xeebaha ee badda Mediterranean.
Inta udhaxeysa Novo Sancti Petri iyo magaalada Roche Xeebta El Puerco waa la kordhiyay. Magaceedu wuxuu ka yimid munaaradda kaas oo ku yaal jiiraan xeebtan oo ka mid ahayd nidaamkii waardiyeyaasha xeebta ee Felipe II uu amar ku bixiyay in la dhiso qarnigii 1811aad. Waxaa lagu dhisay agab asal ahaan ka soo jeeda Roman, waardiyaha ayaa markhaati ka ahaa Dagaalkii Chiclana, oo ahaa kacdoon milatari oo lagu dagaalamay XNUMX agagaarkiisa, iyadoo laga hadlayo dagaalkii Isbaanishka ee Xorriyadda. Sannado ka dib, waxaa loo isticmaalay in lagu xakameeyo marinka tunas, maaddaama Chiclana uu yahay aag leh dhaqdhaqaaq Almadrabera oo sarreeya. Hadda, munaaraddu waxay leedahay barxad cagaheeda ah oo u shaqeysa sidii meel fiirin ah.
In Playa del Puerco, sidoo kale xero hore oo labaatanaad qarnigii hore ahayd ayaa la ilaaliyaa. Dhismaha oo muddo dheer dayacnaa, ayaa dib loo dayactiray oo xagaagii la soo dhaafay Grupo Azotea ayaa halkaas ka furtay Cuartel del Mar, makhaayad casri ah oo ka faa'iideysata booskan gaarka ah calaamadda aqoonsiga oo macaamiisheeda siisa menu aan laga adkaan karin mid ka mid ah meelaha ugu mudnaanta badan ee deegaanka.
Xeebta waxay la mid tahay La Barrosa, oo leh ciid dahab ah iyo biyo saafi ah, inkasta oo ay leedahay meelo badan oo cagaar ah, dunes iyo buur dhagax leh oo siisa a muuqaal dabiici ah oo badan oo soo jiidasho u leh kuwa raadinaya jawi xoogaa ka durugsan magaalooyinka.
Xeebta Sancti Petri
Es mid ka mid ah xeebaha ugu caansan deegaanka. Mararka qaar, marka mawjaddu aad u yar tahay, waxaa lagu tagi karaa iyadoo laga lugeeyo La Barrosa. Xeebta Sancti Petri wuxuu u qaybsan yahay laba qaybood, a fidinta ugu horeysa ee bikro ah leh qiime deegaan sare iyo a lugta labaad ku fidinaysa biya-galeenka ilaa kii hore tuulada kalluumeysiga ee Sancti Petri. Magaalada waxaa la aasaasay iyada oo loo mahadcelinayo degsiimooyinka kalluumeysatada dabinka oo ku xoojiyay dhulkan Chiclana warshad dhab ah oo ku saleysan kalluumeysiga iyo ilaalinta kalluunka.
Sancti Petri ficil ahaan laguma noolaan jirin 1973, laakiin hadda wuxuu ku jiraa geedi socod soo kabasho wuxuuna noqday a barta dalxiiska ee xiisaha leh kuwa booqda xeebta Cadiz. Makhaayadaha ku yaal magaalada waxay bixiyaan wax soo saar cusub oo xagga badda ah, iyagoo noqda a Meel ku habboon oo lagu raaxeysto cuntada caadiga ah ee Cádiz. Iskuulada Windsurfing, shiraaca iyo shirkadaha in abaabul howlaha badda Waxay u guureen aagga, iyagoo soo jiitay hantidiisa dabiiciga ah.
Qasriga Sancti Petri
Xeebta waxaad ka arki kartaa Guriga Sancti Petri, oo horeyba uga tirsanaan jiray degmada San Fernando, laakiin loo arko a Astaanta Chiclana. Qalcadda waxaa lagu dhisay jasiirad si aad halkaas u gaarto waa inaad sameysaa daalacashada. Si loo fududeeyo helitaanka dalxiisayaasha, diyaarad ayaa la dhisay. Waxaa jira dalxiisyada kayak ka taga Punta del Boquerón iyo sidoo kale magaalada iyo tWaxay u horseedaan jasiiradda si aad u booqato qasriga.
Turret waa qaybta ugu da'da weyn ee qalcadda, oo la dhisay qarnigii XNUMXaad Admiral Benedetto Zacarías intii lagu jiray dib u soo celintii Cádiz. Kadib, qarnigii siddeed iyo tobnaad, inta soo hartay waxaa la dhisay oo loo adeegsaday barta militari ee istiraatiijiga ah intii lagu jiray Dagaalkii Xorriyadda, sidoo kale waxay u shaqeyneysay waqtiyo gaar ah oo ah xabsi loogu talagalay maxaabiista siyaasadeed ee waqtigaas.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » Magaalooyinka Spain » Xeebaha ugu wanaagsan ee ku yaal Chiclana: La Barrosa, Playa del Puerco iyo Sancti Petri
Maxaa lagu arkaa degmada Montmartre ee Paris